Olole baqshad ah oo uu bilaabay Mapama si loola dagaallamo abaaraha | Saadaasha Shabakadda
Marka la eego xaaladda abaaraha ee Spain ay tabaneyso, Wasaaradda Beeraha iyo Kalluumeysiga, Cuntada iyo Deegaanka ayaa bilowday ololahan Talaadada «Biyuhu waxay na siinayaan nolol. Aynu daryeesho iyada », iyada oo ujeedadu tahay in lagu baraarujiyo dadweynaha baahida loo qabo in biyo la badbaadiyo iyadoo la wajahayo roob yar oo la filayo sanadka oo dhan.
Ma rabtaa inaad ogaato sida xilliga abaartu u eg tahay?
1 «Biyuhu waxay na siinayaan nolol. Aynu daryeesho »
2 Daryeelka biyaha waa masuuliyadeena
3 Qorshooyinka iyo xayiraadaha abaaraha
«Biyuhu waxay na siinayaan nolol. Aynu daryeesho »
Iyada oo ujeedadu tahay in la sameeyo waaritaan hufan oo biyo leh iyadoo la wajahayo xaaladda abaarta ee Spain soo food saartay, ololaha waxbarashada deegaanka “Biyuhu waxay na siinayaan nolol. Aynu daryeelno.
Biyo waa kheyraad aad u qiimo badan oo ku nool nolosha meeraha iyo, dabcan, horumarka aadanaha. Nasiib darrose, qaddarka biyaha ee laga heli karo jasiiradda ayaa hoos u dhacaya sababo la xiriira roobabka oo yaraada iyo heerkulka oo kordha. Kuwani waa laba arrimood oo la tixgelinayo, maaddaama oo keliya roobku uusan yareyn, laakiin biyo badan ayaa sidoo kale uumi baxa.
In kasta oo ay jiraan hirar qabow iyo horudhac aan ku soo marnay Isbaanish, haddana kheyraadkayagu waxay sii wadaan inay noqdaan kuwo walaac leh, sidaa darteed ma yarayn karno ilaaladayada.
Sannadkii ugu dambeeyay ee biyo-biyoodka, intii u dhexeysay Oktoobar 1, 2016 iyo Sebtember 30, 2017, wuxuu ahaa, sida laga soo xigtay Wakaaladda Saadaasha Hawada ee Gobolka (Aemet), kii sideedaad ee ugu qalalan tan iyo 1981.
Sannad-biyoodka wuxuu bilaabmay Oktoobar 1, 2017 iyo, sida laga soo xigtay xogta Aemet, roobka da'ayay muddada u dhaxeysay Oktoobar 1 iyo Disembar 31 wuxuu ahaa 43% wuxuu ka hooseeyaa qiimaha caadiga roobka in la diiwaan geliyo sannad kasta.
Sidaa darteed, waxaa muhiim ah in la ogaado inay tahay inaan si wanaagsan uga faa’iideysano biyaha si aanan lumin litir badan howlaheena.
Roobku sidoo kale waxaa badanaa lagu cabiraa sanado taariikheed, taas oo ah, laga bilaabo Janaayo ilaa Diseembar. Sidan oo kale, sanadkii 2017 ayaa ku dhammaaday sanadkii labaad ee ugu qalalan tan iyo 1965, iyadoo lagu xisaabtamayo in qaar ka mid ah gobollada dalka Spain ay soo food saartay abaar sanadkii shanaad oo xiriir ah.
Daryeelka biyaha waa masuuliyadeena
Ololaha ay soo saartay Mapama ayaa la horumarin doonaa telefishanka, saxaafadda qoran, internetka, shabakadaha bulshada iyo waliba meelaha caamka ah. Maaddaama aan dad nahay aan isticmaalno biyo maalin kasta, innaga ayaa mas'uuliyad naga saran in aan si wanaagsan uga faa'iideysanno oo aan baranno sida loo badbaadiyo biyaha. Waxay yihiin tilmaamyo yar yar sida xiritaanka tubbada markii aan la isticmaalin, waraabinta xilliyada qorraxdu aysan uumi bixin biyaha, adeegsiga ceelal laba-riix leh, xakameynta biyaha lagu isticmaalo qubeyska, iwm Kuwa farqiga u leh wadarta isticmaalka biyaha ee Isbaanishka, tan iyo, inkasta oo, heer shaqsiyeed aysan wax weyn ka beddelin, waxaan ka badanahay 48 milyan oo qof.
Markaad isticmaaleyso qalabka sida mashiinka dharka lagu dhaqo, waxaa muhiim ah in la isticmaalo marka ay gebi ahaanba buuxaan, maadaama ay na caawin laheyd keydi wax ka badan 3.000 litir bishii. Wax ka qabashada daadashada tuubbada ayaa naga dhigeysa in ka badan 30 litir maalintii. Sidaa darteed, iyadoo la tixgelinayo dhammaan tirooyinkan ku saabsan isticmaalka biyaha, ololuhu wuxuu ina xusuusinayaa in biyuhu aad muhiim ugu yihiin meeraha oo ay sabab u tahay nolosha na siineysa, sidaa darteed, waxaa lagama maarmaan ah in la daryeelo lana ogaado sida loo badbaadiyo.
Qorshooyinka iyo xayiraadaha abaaraha
Iyagoo wajahaya xaalada abaarta, wasaarada beeraha iyo kalluumaysiga, cuntada iyo deegaanka waxay qaaday talaabooyin kaladuwan oo lagu yareynayo saamaynteeda, qorshaynta laqabtay sanadihii udanbeeyayna waxay suurta galisay in laga fogaado xanibaada oo saamayn ku yeelata dadka.
Markay abaar daba dheeraatay ka dhacdo wadan, Qorshayaasha abaaraha ayaa la sameeyay. Isbaanishka, Qorshayaashan Abaaraha waxaa la ansixiyay 2007-dii oo dib u eegis ayaa lagu wadaa. Qorshayaashani waxay dejinayaan borotokoollo waxqabad marka la eego xaalad yaraanta kheyraadka biyaha waxayna ku saleysan yihiin rajada iyo abuuritaanka siyaasadaha waxqabadka Maamulka ee maaraynta biyaha.
Tan waxaa loogu talagalay in lagu yareeyo saameynta deegaanka, dhaqaalaha iyo bulshada ee dhalisa xaalad abaar sida tan Spain ka jirta oo kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Abaaraha » Olole uu bilaabay Mapama si loola dagaallamo abaaraha